Le nguqulo entsha ye Bitcoin Core isekela ngokuzeleko SegWit-amakheli - Blockchain Izindaba
Februwari 20, 2018 admin
Softfork SeqWit esenzeka inethiwekhi Bitcoin ngo-Agasti ngonyaka odlule futhi, ngokungafani hardfork, Ingabe lokhu kwakusho ukuthi ukusetshenziswa saziso yibo bonke ababambiqhaza. Naphezu izinzuzo SegWit ngokuya scalability, futhi ngenxa – zokunciphisa ikhomishana, mass ukwamukelwa akwenzekanga, futhi namuhla SegWit-ukuthengiselana ku blockchain Bitcoin BakaJehova bakha nje phezu 13%.
Inkinga eyinhloko eyinkimbinkimbi yokudala SegWit namakheli “engaqaliwe”, kuyilapho lena isimo esiyinhloko zisebenzise ubuchwepheshe: SegWit-ukuthengiselana engenziwa kuphela uma umthumeli kanye umamukeli kufanele SegWit-amakheli.
Kushicilelwe ngu Bitcoin Core Onjiniyela ukukhululwa kwe 0.16.0 Ikhodi kwenza kube lula ukwakha SegWit-amakheli amaklayenti main, Bitcoin Core. Kwalokhu, SegWit ingezwe umugqa wemiyalo futhi esibonakalayo isikhwama. Engineer Chaincode Lab futhi oyilungu leqembu Bitcoin Core Marco Falke kuqashelwe ukuthi ukudalwa SegWit-amakheli kwakunokwenzeka e izinguqulo ezandulele isikhwama, kodwa le nqubo kwaba “kunalokho sezimiso” futhi “ikakhulukazi kufihlwe.” Manje amakheli SegWit azosethwa ngokwakhona.
Ngaphezu kwalokho, lokhu inguqulo yokuqala olusekela “bomdabu SegWit-amakheli” – bech32 – owasungulwa Onjiniyela uPetru Vuille futhi uGregory Maxwell. Uma eqhathaniswa bitcoins bendabuko, bech32 ingaphezu “kuyasebenziseka” futhi isekela ngokuzenzakalela SegWit. Ngokusho Marco Falke, lokhu “yamaprojekthi ingxenye ukukhululwa.”
Chau uphawula ukuthi ifomethi bech32 inikeza izimali ephansi, kodwa wallets kakhulu ayiseki ke. Onjiniyela alindele ukuthi ukudalwa ngokuzenzekelayo SegWit amakheli kuzosiza ukunciphisa ikhomishini. Okunye ezintsha nazo okuhloswe ngazo okwandisa unenkululeko wesikhwama.
Okwamanje SegWit isekela inani elincani abahlanganyeli emakethe, kodwa inani labo kubonakale okwandisa. Namuhla, phakathi kwabo kukhona wallets BitGo, ephephile, Ledger, electrum, Samourai Wallet, GreenAddress, Bazaar evulekile, MSIG, Edge, Keepke, HitBTC, BTC.com, Kraken, ShapeShift, Bitstamp futhi Bitso, kanye Bitrefill futhi CoinGate amasevisi yokukhokha. Inhloso ukwengeza SegWit amakheli kwikota yokuqala ka 2018 sesivele ibikwe omunye zemali ngobukhulu Blockchain.info, futhi ekuqaleni kuka-February, lokushintshisana Coinbase wamemezela ukuthi isezingeni esigabeni yokugcina ukuhlola ubuchwepheshe, futhi ngokushesha izotholakala kubasebenzisi.
Nakuba ukukhululwa owedlule 0.15.1 ukuthi kuhloswe ekwandiseni SegWit ukusekelwa zemali, Onjiniyela zithi kwethulwa okunye isofthiwe SegWit2x sigudluke focus imisebenzi yabo okwesikhashana. Esinye sezizathu ukuthi kwethulwa sisekela ngokuzeleko SegWit amakheli lihlehliselwe, ngokuvumelana Chau, wukuthi iqembu wafuna ukubona ukuthi SegWit isebenza inethiwekhi, futhi uqiniseke azikho sengcupheni.
mayelana ICO: Ubani eqoqwe izimali kakhulu phakathi yokuthengisa ithokheni
Ngonyaka odlule, IC ...
Njengemodemu kuqinisekisa yayo ...
I Onjiniyela wamemezela hardcore lokuqala Dogecoin blockchain
Ngokusho isimo ...
Thumela Previous:Umlawuli Swiss bahlakulele izimfuneko ICO
Thumela Landelayo:Esisha Cryptocurrency nje Came Out, Yilokho njengoba Bold njengoba Bitcoin